1 Samueri 18:1-30
18 Zvino paakanga angopedza kutaura naSauro, mweya waJonatani+ wakanamatirana+ nomweya waDhavhidhi, Jonatani akatanga kumuda sokuda kwaaiita mweya wake.+ 2 Sauro akabva amutora zuva iroro, uye haana kumubvumira kuti adzokere kumba kwababa vake.+ 3 Jonatani naDhavhidhi vakaita sungano,+ nokuti aimuda sokuda kwaaiita mweya wake.+ 4 Uyezve, Jonatani akapfekenura jasi rake risina maoko raakanga akapfeka, akaripa Dhavhidhi, nenguo dzakewo, kunyange bakatwa rake nouta hwake nebhandi rake. 5 Dhavhidhi akatanga kubuda. Kwose kwose kwaaitumwa naSauro, aiita nokungwara,+ zvokuti Sauro akamuita mukuru wevarume vehondo;+ uye zvakanga zvakanakira vanhu vose pamwe chete nevashandi vaSauro. 6 Pavaipinda, Dhavhidhi paakadzoka achibva kunouraya vaFiristiya, vakadzi vakatanga kubuda mumaguta ose evaIsraeri vachiimba+ nokutamba kuti vanochingura mambo Sauro, vaine makandira,+ vachifara+ uye vaine zviridzwa zvaiva netambo nhatu. 7 Vakadzi vacho vakanga vachipemberera vakaramba vachibvumirana vachiti: “Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake.”+ 8 Sauro akatsamwa kwazvo,+ uye shoko iri rakanga rakaipa sokuona kwake, zvokuti akati: “Vapa Dhavhidhi makumi ezviuru, asi ini vandipa zviuru, zvino kwangosara kuti vachimupa umambo!”+ 9 Sauro akaramba achitarira Dhavhidhi achinyumwira kubvira pazuva iroro zvichienda mberi.+ 10 Zuva rakatevera+ racho mudzimu wakaipa waibva kuna Mwari wakashanda pana Sauro,+ zvokuti akaita somuprofita+ ari mumba, Dhavhidhi paakanga achiridza nziyo noruoko rwake,+ semazuva ekare; uye pfumo raiva muruoko rwaSauro.+ 11 Sauro akakanda pfumo+ racho akati: “Ndichabayirira Dhavhidhi pamadziro!”+ asi Dhavhidhi akamunzvenga,+ kaviri. 12 Sauro akatya+ Dhavhidhi nokuti Jehovha akanga ainaye,+ asi akanga abva kuna Sauro.+ 13 Naizvozvo Sauro akamubvisa kwaari,+ akamugadza kuti ave mukuru wake wechiuru; uye nguva dzose aibuda nokupinda ari pamberi pevanhu.+ 14 Dhavhidhi akaramba achiita nokungwara+ munzira dzake dzose, uye Jehovha akanga ainaye.+ 15 Sauro akaramba achiona kuti akanga achiita nokungwara kwazvo,+ zvokuti akamutya. 16 VaIsraeri vose nevaJudha vose vaida Dhavhidhi, nokuti akanga achibuda nokupinda ari pamberi pavo. 17 Sauro akazoti kuna Dhavhidhi: “Hoyu mwanasikana wangu mukuru Merabhu.+ Ndiye wandichakupa kuti ave mudzimai wako.+ Ingondiratidza kuti wakashinga urwe hondo dzaJehovha.”+ Asi Sauro, akati: “Ruoko rwangu ngarurege kuva pamusoro pake, asi ruoko rwevaFiristiya ngaruve pamusoro pake.”+ 18 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Ndiri ani uye hama dzangu nemhuri yababa vangu ndivanaani, pakati paIsraeri, kuti ndive mukuwasha waMambo?”+ 19 Zvisinei, panguva yokupa Dhavhidhi Merabhu, mwanasikana waSauro, iye akanga atopiwa kuna Adrieri+ muMehora+ kuti ave mudzimai wake. 20 Zvino Mikari,+ mwanasikana waSauro, akanga achida Dhavhidhi, uye vakazviudza Sauro, zvikamufadza. 21 Naizvozvo Sauro akati: “Ndichamupa iye kuti ave musungo kwaari,+ uye kuti ruoko rwevaFiristiya ruve pamusoro pake.” Naizvozvo Sauro akati kuna Dhavhidhi: “Ucharoora kwandiri mukadzi uyu wechipiri nhasi.” 22 Uyezve, Sauro akarayira vashandi vake kuti: “Taurai naDhavhidhi pachivande, muchiti, ‘Tarira! Mambo akufarira, nevashandi vake vose vanokuda. Zvino roora kwamambo.’” 23 Vashandi vaSauro vakatanga kutaura mashoko aya Dhavhidhi achinzwa, asi Dhavhidhi akati: “Munofunga kuti chinhu chiri nyore here kuroora kwamambo, zvandiri murombo+ uye asingaremekedzwi?”+ 24 Vashandi vaSauro vakabva vataura naye, vachiti: “Dhavhidhi ataura mashoko akadai.” 25 Zvino Sauro akati: “Muti kuna Dhavhidhi, ‘Mambo anofarira, kwete mari yeroora,+ asi zvikanda zvepamberi+ zvine zana zvevaFiristiya, kuti atsive+ vavengi vamambo.’” Asi Sauro, akanga aronga kuti Dhavhidhi aurayiwe noruoko rwevaFiristiya. 26 Naizvozvo vashandi vake vakataurira Dhavhidhi mashoko aya, nyaya yacho ikafadza Dhavhidhi, kuti aroore kwamambo,+ uye mazuva acho akanga asati apera. 27 Naizvozvo Dhavhidhi akasimuka, iye nevarume vake, vakaenda, vakauraya+ varume mazana maviri pakati pevaFiristiya, Dhavhidhi akauya nezvikanda zvavo zvepamberi,+ akazvipa mambo zvakakwana, kuti aroore kwamambo. Sauro akamupawo Mikari mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake.+ 28 Sauro akaona uye akaziva kuti Jehovha akanga aina Dhavhidhi.+ Asi Mikari, mwanasikana waSauro, aimuda.+ 29 Asi Sauro akanga achiri kutya Dhavhidhi, uye Sauro akava muvengi waDhavhidhi nguva dzose.+ 30 Zvino machinda+ evaFiristiya aibuda, uye kazhinji Dhavhidhi paaibuda aiita nokungwara+ kupfuura vashandi vaSauro vose; uye zita rake rakava rinokosha kwazvo.+